QM oo 174 Mashruuc Ka Hirgelineysa Soomaaliya Sanadka 2010 • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / QM oo 174 Mashruuc Ka Hirgelineysa Soomaaliya Sanadka 2010
QM oo 174 Mashruuc Ka Hirgelineysa Soomaaliya Sanadka 2010
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay bixinayso lacag deeq ah oo wax looga qabanaayo xaalada Bin’aadanimo ee ka taagan gudaha dalka Soomaaliya.
War qoraal ay soo saartay Hay’adda qaabilsan Bin’aadanimada ee Qaramada Midoobay marki magaceeda la soo gaabiyo ee UNOCHA ayaa sheegtay in lacag dhan ah 689-milyan oo doolarka Maraykanka lagu bixin doono 174-mashaariic oo sanada 2010 laga samayn doono gudaha dalka Soomaaliya oo wax laga qabanaayo xaalada Bin’aadanimo ee ka taagan gudaha dalka.
Waxaana ay Hay’addu sheegtay in Hay’addaha samafalka ee ka howlgala gudaha dallka ay soo gudbiyeen cabasho xoogan oo ku aadan in lala soo gaaro Gargaar Bin’aadanimo ka dib marki ay saamayn ku yeesheen dagaalada iyo Abaaraha ka jira gudaha dalka.
OCHA ayaa sidoo kale ku warantay in tirada dadka baahan ay bateen bartamaha sanadkaan 2009 ka dib marki dagaalo qaraar ay xaafadaha magaalada Muqdisho isku fara saareen Ciidanka DFKM ah iyo kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda kaas oo sababay barakac aad u xoogan.
Waxaana ay Hay’addu sheegtay in iminka dadka tabaalaysan ay gaarayaa 3.64-milyan,waxaana ay sheegtay in dhamaan dadkaas ay sugaan Gargaar Bin’aadanimo ayna tirada dadka baahan si badan doonaan Sanada 2010.
Hay’addaha Samafalka ayaa inta badan ka deyriya xaalada Bin’aadanimo ee ka taagan gudaha dalka Soomaaliya,waxaana ay ku tilmaameen sanadkaan midki ugu xuma ee soo maraa abid.